alldayniie.com » Maxkamadd Ku Taala Magaaladda London oo Xukun Ku Riday Muwaadin Soomaliyeed
Maxkamadd Ku Taala Magaaladda London oo Xukun Ku Riday Muwaadin Soomaliyeed
Mahad Xasan oo ah muwaadin soomaaliyeed oo ku nool magaalada London ee dalka Britian ayaa lagu xukumay 7 sano oo xabsi ah sida uu sheegay gudoomiye ku xigeenka maxkamadda magaalada Swindon.
Maxkamadda ayaa ku eedeesay mahad xasan inuu tooreeyay gabar ay Saaxiibo ahaayeen kadib markii uu waayay lacag dhan 30 pound oo uu deemiyay.
Waxaa kaloo maxkamadda ay ku eedeysay ka gancsiga drugs-ka iyadoona weerarka uu dhacay sanadii hore ee 2017, waxaana uu horay u dafiray dhamaan eedeemaha loo soo jeediyay waloow uu aqbalay bishii September 5-teedii 2017-kii.
Qareenka u doodaya gabadha la tooreeyay ayaa waxa uu sheegay in dhaawacyo halis ah ya ka soo gaareen kaliyaha waxaana ay awoodi weysay in ay sii socoto, waxaana loo qaaday mid kamid ah xarumaha caafimaad ee London.
James Scanlon oo ah qareenka u dooday muwaadinkan soomaaliyeed ee 7-sano lagu xukumay ayaa waxa uu sheegay in aysan jirin dambiyo uu horay u galay tan iyo markii uu yimid Britian waxaana uu dalbaday in si ka duwan 7 sano oo xabsi ah loo wajaho.